I-Little Buffalo Lodge yoMhlobo kunye neeGetaways zoSapho - I-Airbnb
I-Little Buffalo Lodge yoMhlobo kunye neeGetaways zoSapho
Currie, Minnesota, United States
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguElizabeth
Intlupheko yesikolo semizi-mveliso yezobugcisa eLittle Buffalo Lodge imisela ithoni yendlela yokuphumla ezele lulonwabo. Ikhitshi eligcweleyo lenza ukupheka kube nempepho, eneendawo zokuhlala abantu abalishumi ngaphakathi okanye ngaphandle. Iindawo ezimbini zokuhlala kunye nendawo yokuphumla enedesika zifanelekile kwii-hangouts zamaqela (ngelixa zikwabonelela ngegumbi lokusabalalisa xa kufuneka). Chitha iintsuku zakho nge-kayaking, ukukhwela iphenyane, kunye nokuloba kwi-Buffalo Lake ezolileyo, okanye ubethe iivenkile zasekhaya zakwa-antique kwaye wabelane nge-toast kwi-Painted Prairie Vineyard. Ukubaleka kwakho okugqibeleleyo kukuthafa nje!
Ulungelelwaniso olugqibeleleyo lokubuyela kwindawo efihlakeleyo kunye nentuthuzelo ye-posh, le ndlu yechibi enobuhlobo yosapho ibekwe kwichibi lokusingqongileyo. Nqamula kwisiphithiphithi kodwa gcina bonke ubumnandi bekhaya bukufutshane. Ngokunikela ingqalelo engakumbi kwiimfuno ezikhethekileyo zeentsapho, kwanabazali banokunandipha ikhefu abalifanelekelayo. I-Little Buffalo Lodge ibe yindawo engasemva egqibeleleyo yeeholide zosapho, iindawo zokubalekela iintombi, ngeempelaveki zomtshato, kunye nokunye!
4.93 · Izimvo eziyi-45
Ukuba ufuna ixesha uwedwa:
I-Buffalo Lake lichibi elincinci lethafa elikufutshane neDovray, eMinnesota. Ngefama enye kuphela ezantsi kwendlela kunye nokusungulwa kwesikhephe sikawonke-wonke esisetyenziswa kancinci, uya kuba nalo echibini uwedwa.
Ukuba ungathanda ukunxibelelana nabahlali:
-Ipeyintiwe Isidiliya sePrairie, ukubaleka kosapho kunye nobuhlobo nomntwana, kukuhamba ngemizuzu emihlanu ekhawulezayo (heyi, kukufutshane ngokwaneleyo utyelelo lwemihla ngemihla).
- Amantongomane kaloliwe kunye nembali buffs inokuya End-o-the-Line Railroad Park e Currie (5 imizuzu). Ukusuka apha tsiba kumzila webhayisekile (okanye ubuyele emotweni) kwaye uye ku...
-Lake Shetek State Park, ebonisa ulwandle lokuqubha loluntu, iindlela, amabala epikiniki, nokunye. (15 imiz)
- Ukuba u tyelela ngoJulayi, khangela i-Wilder Pageant. Idrama yangaphandle isekwe kwixesha likaLaura Ingalls Wilder eWalnut Grove, MN. (30 imiz)
- Funda kubantu bomthonyama bendawo eJeffers Petroglyphs. Jonga ngononophelo kwaye uya kufumana imizobo engaphezulu kwama-5,000 yamatye esusela emva kwiminyaka engama-7,000. (35 imizuzu)
- Thatha ikhefu echibini kwaye uthathe idiphu echibini likawonkewonke eSlayton okanye eTracy. (yombini imizuzu engama-25)
Ngokuxhomekeke kwimihla yokuhlala kwakho, singafumaneka ukuze sikubonise ngeenxa zonke (ukuba uyafuna). Umamkeli usoloko efumaneka ngetekisi, ngefowuni, okanye ngencoko yevidiyo.